Wararkii U Dambeeyay Khilaaf Soo Kala Dhex Galay Madaxda Afghanistan – somalilandtoday.com
(SLT-Kabul)-Ku-simaha Raysal wasaare ku-xigeenka Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, ayaa ka soo muuqday cajalad fiidiyow ah si uu u beeniyo wararka sheegaya inuu ku dhaawacmay isku dhac dhex maray isaga iyo koox ka soo horjeeda ee Taliban.
Aasaasaha Taalibaan ayaan muddo dhowr maalmood ah la arag. Waxaana jiray warar sheegaya inuu khilaaf soo kala dhex galay hoggaamiyeyaasha Taliban, oo uu ku lug lahaa Baradar iyo koox iska soo horjeedda oo daacad u ah shabakadda awoodda badan ee Haqqani.
Laakiin wareysiga cusub ayuu Baradar ku beeniyay wararka ku saabsan isku dhaca gudaha ee la sheegay.
“Maya, tani run ma aha; waan fiicanahay waana caafimaad qabaa,” ayuu yidhi Baradar markii la weydiiyay bal in la dhaawacay iyo in kale.
Waxaa jiray warar aan la xaqiijin oo sheegaya in is maandhaafka hoggaanka Taalibaan uu soo taagnaa tan iyo markii Baradar laga waayay fagaareyaasha maalmihii la soo dhaafay.
“Waxaan ka maqnaa Kabul, mana aanan helin internet ii fududeyn lahaa in aan ganafka ku dhufto wararka been abuurka ah,” ayuu raaciyay.
Muuqaalka gaaban oo lagu baahiyay Twitter-ka xafiiska siyaasadda Taliban ee Doxa ayaa muujinayay isaga oo fadhiya kursi u dhow wareyaha telefishinka dowladda, oo sida muuqata ka akhrinaya warqad.
“Waa Alle mahadiis ah in aan leenahay xidhiidh wanaagsan oo ah is xushmeyn. Xidhiidhkeena xitaa waa ka wanaagsan yahay midka ka dhexeeya qoysaska,” ayuu yidhi.
Baradar ayaa ahaa hoggaamiyihii ugu horreeyey ee Taalibaan oo si toos ah ula xidhiidhay madaxweyne Mareykan ah, ka dib markii uu wadahadal dhanka taleefanka ah la yeeshay Donald Trump, sannadkii 2020-kii.
Intaas ka hor, wuxuu saxeexay heshiiskii Doxa ee ku saabsanaa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, isagoo wakiil ka ah Taalibaan.